Mas'uuliyadda Bulshada - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Shirkadaha iyo shaqaalaha
Shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansan tahay fikradda dadka u janjeedha, waxay ilaalisaa xuquuqda iyo danaha shaqaalaha shirkadaha, waxay siisaa hoy bilaash ah iyo habeynleyda shaqaalaha khadka wax soo saarka, sameynta sanduuqa boostada ee soo jeedinta shaqaalaha, dhageysiga codka shaqaalaha, waxayna ku dadaalaysaa inay abuurto madal koritaanka guud ee shirkadaha iyo shaqaalaha.
Shirkadaha liers alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha
Marka la eego alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha, wadashaqeynta saaxiibtinimo ee muddada-dheer ee ay la leedahay shirkadda ayaa la sii waday muddada warbixinta. U hoggaansamida fikradda ah daacadnimada iyo kalsoonida, shirkaddu waxay raadineysaa horumar la leh alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha, iyo iskaashiga ku habboon ayaa la sii xoojiyay.
Ganacsi iyo bulsho
Maaddaama ay tahay shirkad dowladeed oo aan liiska ku jirin, shirkaddu waxay fiiro gaar ah siisaa mas'uuliyadda ka saaran bulshada iyada oo ah shirkad dadweyne aan diiwaangashanayn iyada oo ku dadaalaysa soo celinta dhaqaalaha saamileyda. Si si qoto dheer loo hirgeliyo istiraatiijiyadda horumarinta iyo yareynta saboolnimada ee qaran, shirkaddu waxay sameysay dadaal firfircoon si ay u ciyaarto doorka shirkadaha dadweynaha ee liisaska ku jira ee u adeega istiraatiijiyadda qaran ee yareynta saboolnimada. Intii lagu gudajiray warbixinta, shirkadu waxay hirgalisay qorshaynta yareynta saboolnimada siyaabo kala duwan, sanadihii la soo dhaafay, waxay ugu deeqday tobanaan kun yuan si ay u taageerto dhismaha meelaha saboolka ah.